musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Mariano Diaz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anonzi "Chikara". Isu tinokupa yakazara chinyorwa cheMariano Diaz Childhood Nhau, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Upenyu hweMunhu, Mararamiro uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paaive mwana kusvika pakuzivikanwa.
Tarisa, tinokupa iwe Mariano Diaz Kurarama Kwepfuura uye Great Rise. Image Credits: Ara.cat, AS, Diariogol uye RealMadrid.
Ehe, munhu wese anoziva Mariano semutambi weReal Madrid uyo akatanga isingafarirwe ASI ndakaziva pane iro zuva rakanaka (1 yaKurume 2020), zuva raakapetwa kaviri kutungamira kweReal Madrid mumutambo we 2-0 mukukunda FC Barcelona. Yedu vhezheni yeMariano Diaz's Biography iyo inonakidza kwazvo. Ikozvino pasina kumbokura, ngatitangei, kutanga neyedu Zviri Content pamberi pake FULL NYAYA.
Mariano Diaz Yenyaya Yemwana Nyaya:
Iyi kusvika ikozvino imwe yekutanga yeMariano Diaz Yemwana Mifananidzo. Chikwereti: AS uye diariogol
Mariano Díaz Mejía akazvarwa pazuva rekutanga raNyamavhuvhu 1 kuna amai vake, Mariana Mejía uye baba, Mariano Díaz (anovaka muviri) kuchamhembe-kumabvazuva kweBarcelona, ​​Spain. Nhabvu weSpanish akakurira padivi pamwe nemukoma wake uye hanzvadzi mukati Premià de Mar, Guta reSpain rinoonekwa sese nzvimbo yekushanya uye imba yekugara yeBarcel.
As ASwebsite inoti, vabereki vaMariano Díaz pakuzvarwa kwemwanakomana wavo vakaita kuti azive zita "Mariano Diaz”Uye izvi zvinomuita iye wechitatu kutumidzwa zita mumhuri yake. Waizviziva here? Vaviri vevabereki vaMariano Diaz- baba vake nasekuru kusanganisira iye oga ane mazita akafanana.
Semwana mudiki, Mariano mudiki aipedzerwa nguva yakawanda nasekuru wake anoitika kuva ex-nhabvu neakazvimirira Catalan kirabhu. Nekuda kwepedyo kwavo, mutambo wenhabvu wakaunzwa zvishoma nezvishoma kwaari.
Sekureva kwaMariano Diaz's mum, Mariano achitamba nhabvu achiri mudiki, madziro mumhuri yemhuri akatambura zvakanyanya sezvo yaisvika nemavara ebhora. Akaudzawo Marca kuti Mariano akashandisawo sofa seanosimudzira zvibodzwa. Gara uye zorora sezvatichapa zvimwe zvakawandisa zvehupenyu hwake hwepakutanga Mariano Diaz nebhola mune chikamu chakazotevera chechinyorwa ichi.
Mariano Diaz's Kwakavambwa Kwemhuri uye kumashure:
Kutonga neiye akataridzika kumeso kwechiso chake, iwe unobvumirana neni kuti mhuri yaMariano Diaz ine mucherechedzo wedzinza. Chokwadi ndechekuti, mumwe wevabereki vaMariano Diaz- baba vake ndiSpanish chaiyo. Mai vake, kune rumwe rutivi, vanobva kuDominican Republic. Mariana Mejía akaberekerwa kuSan Juan de la Maguana (guta nemataundi mudunhu rekumadokero kweDominican Republic. Nekungotarisa pikicha iyi inofadza yevabereki veMariano Diaz, unogona kufungidzira zviri nyore kuti ndiani pakati pavo ane hunhu hwakakura hwakatorwa naMariano. MUMI YAKO ICHINOTESA IZVI !!!
Sangana naMariano Diaz Vabereki- Baba vake Mariano Diaz naamai, Mariana Mejia
Mhuri Yacho: Mariano Diaz anobva kumhuri yepakati-yepasi yemhuri yemhuri, imwe yaishandiswa nababa vake mune zvechitendero, nekuda kwemari kubva kubhizimusi rake rekurovedza muviri. Kare ikako, kubva kuma1990s, mhuri yaMariano Diaz yaivimba neyeSpanish Fitness indasitiri kuti vawane mari yaiita kuti varambe vachienda.
Mariano Diaz's Zvehudiki- Makore Ekutanga neBhora:
Achiri mudiki, Mariano akatamba nhabvu nemukoma wake chero kwaaigona. Kutenda kuna muzukuru wake uye mukoma mukuru, Mariano mudiki akatanga nzira yake kusvika pakuva nyanzvi yebhola kwibhora kubva pazera diki. Kana veSpanish media (Marca) vakashanyira Mariano Diaz 'mhuri yeSpain, mai vake akavaudza zvinotevera nezvekutanga kwemwanakomana wake bromance nebhola. Nemashoko ake;
“Mariano aigara achitamba nemukoma wake kumba. Kumashure, madziro akange akadhirowewa nemavara ebhora uye sofa dzaishandiswa sechinangwa.
Ini ndaigaro taura kuti handisi kuzotenga sofa nyowani kusvikira vakura. Izvi zvinodaro nekuti ndikatenga imwe itsva vaibvarura zvekare kuita zvidimbu. Kunyangwe shamwari dzaKe dzakangofanana nepamakore mashanu. ”
Mai Mariano pakusimudza mutambi.
Mariano Diaz's Biography- Iyo Yekutanga Basa Rehupenyu:
Gore ra2002 ndipo pakatanga rwendo rwekuva nyanzvi yemutambo wenhabvu kuna Mariano. Muedzo wakabudirira gore iro rakamuona achijoinha giredhi redzidzo ya Reial Club Deportiu Espanyol, inozivikanwawo se RCD Espanyol academy. Pakusvikira chikoro chedzidzo, vazhinji vakaona Mariano semukomana ane mbiri uye akasununguka.
Iyi yaive Mariano's RCD Espanyol academy ID kadhi. Credits: Diariolagrada
Ndichiri muRCD Espanyol's Alevín B, Mariano akavezwa naLluís Planagumà Ramos. Kare ikako, mukomana wechidiki akawana mukurumbira nekuda kwejira rake iro raionekwa sounhu hwake hukuru. Kumhanya kukuru kwakateverwa tsika yekukurira mucherechedzo wake uye kuita zvinhu kubva mubhuruu nemabhora ebhora rake. Waizviziva here? Mariano Diaz zvinangwa makumi mana nematatu mumwaka wake wepamusoro wepuraimari zvakamuendesa kuhwina Pichichi Trophy iyo yakapihwa nemumiriri kubva kukambani yeSpanish Aigua Del Montseny.
Mariano Diaz Kukura Kwemwana- Pano ndipo paari kugamuchira mubairo semwana webhola. Credits: Diariolagrada
Wechidiki akasara mukirabhu kwemakore mana maari HAUDA wapedza kugadzira kusvetuka kukuru.
Biography Chokwadi- Iyo Nzira yeku Mukurumbira Nyaya:
Mariano haana kumbobvira aine ndima yakapfuura kuenda kuEspanyol Infantil B timu mumwaka wa2005-2006. Kunyangwe asiri mumwe wevakanyanya kusarudzika, nyaya yake huru yaive "urefu". Kusasangana nokukwira kwaidikanwa kune wechidiki wezera iro zera raireva kutyisidzira kwekugara kwake nekirabhu.
Kuona nguva yake yemutambo ichideredzwa kusvika pakunyanyisa kutamba maminetsi gumi nemashanu pamutambo, vabereki vaMariano Diaz vakasarudza kuita nekumanikidza mwanakomana wavo kubuda mukirabhu. Vakaramba vachimunyoresa nePremià academy kwaakatamba kubva 15 kusvika 2006. Mushure megore nekirabhu yake yaitevera (Sánchez Llibre), wechidiki akawana runhare kubva Badalona kwaakapedza basa rake rehudiki muna 2011.
Mariano achiri kuBadalona timu yepamusoro akaputika zvakare. Akarondedzerwa seanokurumidza uye akangwara kwazvo musango, Chapungu chidiki chaitamba nekuzvivimba. Izvi zvakakwezva Real Madrid uyo aisakwanisa kuramba asi kumuwana muna 2011.
Biography Chokwadi- Iyo Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Kufanana nevakawanda vakapedza kudzidza kubva kumakirabhu madiki, kujoina Real Madrid zvinoreva kudzokera kunhabvu yevechidiki. Akafambisa mberi akaita basa rake repamba nekurova makumi mana makumi mana ezviuru zveReal Madrid academy asati asimudzirwa kuchikwata chikuru nemaneja Zinedine Zidane. Kukuvara kwemashure kumutambi Karim Benzema kumuona achiiswa chimiro. Asi Benzema paakangopora, mikana yakazova shoma kune wechidiki. Zvakadii hazvo, mupiro wake mukukunda misungo inotevera yaive yakakosha.
Incase iwe wanga usingazive, The Beast yakakunda zvinenge zvese neMadrid
Mushure mekubatsira Real Madrid mumakore avo e trophy kutonga. Mariano musi wa30 Chikumi 2017, Mariano akasarudza kubva kuSpain kuti awane ruzivo rwenhabvu. Akasaina kuOlympique Lyonnais uko akasvitsa zvibodzwa gumi nemasere mumwaka weligi nekuda kwekubatana kwakaringana neayo Memphis Depay uye Nabil Fekir (19 uye 18 zvinangwa zvichiteerana). Achizviratidza kuva chechokwadi muchina wemuchina, Real Madrid yakafunga kutambanudza maoko avo kuti vatore murume wavo.
Mariano Diaz's Rise neOlmpique Lyonnais
Pazuva 29th raNyamavhuvhu 2018, Mariano Diaz akadzokera kuReal Madrid uye akakomborerwa nehembe yaN7 yakasiyiwa naChristiano Ronaldo. Mari yechipiri yekuparidzira kuMadrid yave ichikosha kusvika parizvino. Imwe yeakanakisa nguva yake yakauya panguva yeElclassico, pazuva rekutanga raKurume 1. Kuuya kubva pabhenji munguva yake, chikara chakawedzera kaviri kutungamira kweReal Madrid mukukunda 2020-2 mukutarisana neFC Barcelona mumaminetsi makumi mapfumbamwe.
Nyeredzi iri kusimuka yakabatsira zvakapetwa kutungamira kweReal Madrid mukukunda 2-0 neFC Barcelona musi wa 1 Kurume 2020 El Clasico
Mariano Diaz's Musikana, Mukadzi, uye Kid:
Nekusimuka kwake mukurumbira uye kuzviitira mukurumbira munhabvu, zvine chokwadi chekuti vateveri vazhinji vangada kuziva kana murume akabudirira saMariano Diaz aine musikana, kana kana achinge akaroora, zvinoreva kuti atove nemukadzi. Chokwadi ndechekuti, kumashure kweakabudirira nhabvu, kune musikana akanaka anobuda anoenda nezita Yaiza Moreno Antho.
Yaiza Moreno muenzaniso uye anogadzira shangu anga achidanana naMariano Diaz kubvira 2012. Kutonga kubva pachitarisiko chake, zvechokwadi paragon yorunako, mumwe uyo inowedzera chivimbo mune yega yega snap rake.
Sangana nemusikana waMariano Diaz, Yaiza Moreno- Haasi akanaka here? Chikwereti: Instagram
Mariano uye Yaiza hukama echinokanganisa kuongorora kweruzhinji ziso nekuti iri mutambo-wakasununguka uye uzere nerudo. Runako Yaiza zvirokwazvo munhu asingazvifariri uye anoita chero chinhu kunze kwekungopa rubatsiro rwemurume wake, kunyangwe iwe zvinoreva kuisa hupenyu hwake pachemberi.
Musikana waMariano Diaz Yaiza Moreno anotsigira murume wake pane zvese zvaanoita. Chikwereti: Pinterest
Panguva iyo Mariano paakadzokera kuReal Madrid, mamirioni evateveri akaona kwavo kwekutanga kwemusikana wake anodadisa panguva yemharidzo yake. Kutonga kubva pamufananidzo uri pazasi, unooneka Yaiza ane yakabvumidzwa nevabereki vaMariano Diaz. Izvi zvinoreva kuti muchato wavo unogona kuve unotevera danho rekare.
Musikana waMariano Diaz Yaiza Moreno akafananidzirwa panguva yake mharidzo yeMadrid Chikwereti: Twitter uye dakarflash
Kuziva mararamiro aMariano Diaz kwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehupenyu hwake hwekugara. Kutanga kuenda, kuve neyakakura mambure yakakosha, mutengo wemusika we € 16m uye unowana muhoro wegore rose we5 XNUMXmillion (panguva yekunyora) zvirokwazvo anomuita miriyoni yemirioni. Pasina mubvunzo, Mariano anokwanisa kurarama hupenyu hwoumbozha.
Kutaura nezve mararamiro, Mariano Diaz anogara hupenyu hwakarongeka muMadrid. Kana akapiwa mukana, haazonyara kuratidza hupfumi - dzimba diki (dzimba), zvipfeko zvinoyevedza, wachi yemawoko, majeti akasarudzika, yacht nezvimwe. Mumigwagwa yeMadrid, iwe unonyanya kuona Mariano achipfeka zvakapetwa uye zvakanyanya kukosha, achityaira mota yake yechinyakare inopenga.
Zvinotaridzika seMariano Diaz's Car- Chokwadi chiri, iye anosarudza nzira yechinyakare yechikoro
Kunze kwebhola, Mariano ariwo mutyairi akanaka kwazvo. Waizviziva here? Akambopedza chetatu mumutambo wekuenda-karting wakarongeka uyo Audi. Akatora wechitatu kumashure nekutyaira madhiraivha; Nacho uye Ramos.
Mariano Diaz's Hupenyu Hwega:
Mariano Diaz ndiani abva paGomba?… Mhinduro ndeiyi, he mumwe munhu anonzwa akasununguka chaizvo nechisikigo. Kana uchida nguruve uye sharks, ipapo hausi wega. Chokwadi ndechekuti, iwe uchave unofarira kudzidza kuti Mariano akafanana newe- A Die-Huru Nguruve uye Shark mudiwa.
Mariano anofarira kushanyira nzvimbo inonzi "Paradise"MuBahamas, kwaanosangana neshamwari dzake dzepedyo (ona pazasi). Ndiani anoziva?… Mariano anogona kutotora imwe yemhuka idzi.
Kusvika pakuziva Mariano Diaz Yemunhu Hupenyu kubva pagomba rekutamba. Chikwereti: Instagram
Chekupedzisira, pahupenyu hwaMariano Diaz, iye munhu anoomerera kune yake yekuda quote iyo inoenda seinotevera;
"Zvakakosha kuti utarise nguva dzose kwauri kuenda, pane kutarisa pawakange uri".
Mariano Diaz's Hupenyu hwemhuri:
Kune vakawanda vanofamba nhabvu, nzira yeku stardom ingadai isina kunyatso kunakisa sezvayakaita pasina rubatsiro rwemhuri. Kutaura nezvemhuri, zvinoita kunge Mariano haana kungokura ari oga nevabereki vake, asiwo padivi pemukoma wake uye hanzvadzi yakanaka. Muchikamu chino, tinokanda mwenje wakawanda pavabereki vaMariano Diaz nevamwe vasara vemhuri yake yakanaka.
Yakanakisa yeMariano Diaz Mhuri yatinowana. Iye zvino tarisa-tarisa chimiro chemuviri wababa vake. Chikwereti: Tumblr
Zvimwe nezva Baba va Mariano Diaz:
Kutonga kubva kune yake yakakura inotarisa pamufananidzo uri pamusoro, iwe unobvumirana neni kuti baba vaMariano Diaz vanoratidzika sevakavaka muviri. Chokwadi ndechekuti, aimbove mumhanyi weSpain aine rukudzo mukusimudza uremu.
Kunyangwe pazera rake, Mariano Diaz Snr achiri kumhanyisa kurovedza muviri mukati Premià Del Mar, dunhu riri pamhenderekedzo yeCatalunya kwakazvarirwa mwanakomana wake Mariano. Achitaura nezve pesvedzero yababa vake pabasa rake, Mariano akamboti;
“Nguva zhinji ndinoenda nababa vangu kunzvimbo yekurovedza muviri. Kutenda kwaari, ndakadzidza kudzidzira uye kukuvadza kudzivirira, izvo zvese zvakange zvakanakira basa rangu. ”
Zvimwe nezvaMariano Diaz's Mum:
Vanamai Vakuru vakagadzira vakabudirira nhabvu vanakomana uye Mariana Mejía haasi iwo mutsauko. Iye akaberekerwa kuSan Juan de la Maguana (guta nemataundi mudunhu rekumadokero kweDominican Republic) nekuda kwekuzvarwa kwake uye kwemhuri.
Waizviziva here? Pakati pevabereki vaMariano Diaz, ndiMariana Mejía uyo ane gene rakakurumbira sekutorwa kwemwanakomana wake nemwanasikana wake mushure mekuita rake ganda. Inoratidzwa pazasi, vese Mariana naMariano vanonakidzwa neukama zvinoita kunge hwepedyo.
Sangana naMariano Diaz Amai vaamai- Mariana Mejía- Vaviri vanoratidzika kunge vepedyo. Chikwereti: imbwa
Zvimwe nezve Mariano Diaz's Granddad:
Mariano's super muzukuru anodiwa anonzi Mariano Diaz Snr2. He ine mhosva yebhola ichipinda zvakadzika mumhuri yeropa. Pasina iye, Mariano angadai asina kuve mutambi wenhabvu. Muchokwadi, hunhu hwekusakanda mapfumo pasi hunobva kuna sekuru vake, aimbova mutambi wenhabvu uye anorangwa uyo akambotamba yekirabhu yeCatalan ine mwero.
Zvimwe nezveMariano Diaz's Hama:
Mariano Diaz ane munun'una anoenda anonzi Eduard Marcel Núñez (inoratidzwa pamusoro. Sezvakangoita Mariano, iyewo mutambi wenhabvu anoridzira CE Vilassar de Dalt. Iyi inhabvu yenhabvu iri mumusha muCatalonia, Spain (mudunhu reBarcelona).
Zvakare kukuzivisa iwe, mukoma waMariano wehafu, Eduard Marcel Núñez ihama mudiki kune imwe nhengo yemhuri inonzi Pedro Antonio Núñez. Pedro, zvakare mutambi wenhabvu akaberekerwa muHato Mayor del Rey, Dominican Republic.
Zvimwe nezveMariano Diaz's Sista:
Uchitarisa kubva pamufananidzo wemhuri unozvininipisa uri pamusoro, iwe unobvumirana nesu kuti zvinoita kunge Mariano ane hanzvadzi, iye savamwe vana vamai vake akatevera jini rake raamai.
Mariano Diaz's Untold Chokwadi:
chokwadi #1: Kuedzwa Kubira:
Mariano Diaz aimbove mubatwi weakamboedza kuba. Ichi chiitiko chakaitika mushure mekushanyira chitoro chakanakisa chiri muCalle Serrano Street, Madrid (Ronaldo Webhusaiti mushumo).
Paaifamba mumugwagwa akatakura mabhegi ezvimwe zvinhu zvaanga achangotenga, mumwe munhu akauya kwaari akaedza zvine simba kuba zvibhegi. Mushure mekupopota kuti abatsirwe, mushana akabva amhanyisa mhiri kwemugwagwa. Vanhu vaviri vakamhanya vachitevera munhu anga achiba mabhegi paMariano. Mushure mekukurirwa, akagumisa kukanda mabhegi pasi. Izvi zvakateverwa naMariano achinhonga ndokusiya chiitiko ichi asina kubvumira Mapurisa kupindira.
chokwadi #2: Akasiya kutamba achiridza amai vake Nyika:
Mariano akambobvuma kukodzera kwake kutamba Dominican Republic kuburikidza naamai vake. Nekuda kweizvozvo, akaita dhiri repasirose musi wa 24 Kurume 2013 mumutambo une hukama neHaiti, achirova iro rekupedzisira mukukunda 3-1.
Waizviziva here? Ndiwo ungangove mutambo wake wekupedzisira asati afunga kupa nyika yemurume wake. Mariano akazviitira izvozvo kuti arege kuva cap-yakasungwa uyezve, tichitarisa Spain mukana timu yenyika inodana kumusoro. Kubudirira uku kwamuita kuti arambe achikoka zvimwe zvinobva munyika yamai vake.
chokwadi #3: A Julia Roberts Fan:
Munyika yevamwari vanozivikanwa muHollywood, Real Madrid yakawana mvumo. Waizviziva here? Julia Roberts ndomumwe wevateveri vepamusoro svikiro akambosangana naMariano. Mufananidzo uri pazasi ndiye iye naMariano Diaz mune imwe yekushanyira kwake guta guru reSpain.
Iyo Real Madrid Star yakambosangana naJulia Roberts. Chikwereti: Instagram
chokwadi #4: Kuparara Kwake
Kubva paakadzokera kuReal Madrid, vateveri vakatanga kufunga chokwadi cheMariano Diaz, kunge yakawanda sei yaanogamuchira pamwe naye hofori yechiSpanish.
Musi wa 29 Nyamavhuvhu 2018, Mariano akavhara chibvumirano chemakore mashanu neReal Madrid, chimwe chakamuona achitora muhomwe mari inotenderera € 4million pagore. Kuputsa Mariano Diaz mubhadharo muhuwandu zvidiki, isu tine zvinotevera.
Mabhadharo muEuro (€)
Kuwana mari muPound Sging (£)
Mapato muUSA ($)
Kwegore € 5,000,000 £ 4,294,250 $5,643,100.00
Pamwedzi € 416,666 £ 357,854 $470,258
Pa Vhiki € 104,116 £ 89,463.5 $117,564
Pazuva € 14,881 £ 12,780.5 $16,795
Pa Awa € 620 £ 532.5 $699
Per masekondi € 0.17 £ 0.14 $0.19
Uku ndiko kuwana kweMariano Diaz kubva pawakatanga kuona peji ino.
Waizviziva here? Mushandi wepakati muSpain anofanirwa kushanda kweanosvika makore 2.3 kuti awane mari € 333,333 iyo ndiyo iyo mari yedu chaiyo Mariano Diaz anowana mumwedzi.
chokwadi #5: Mariano DiazTattoos:
Mariano anotenda mutsika ye tattoo inozivikanwa chaizvo munyika yanhasi yemitambo. Sezvinoonekwa pazasi, iye Los Blancos mutambi wenhabvu ane ma tattoos anoratidza chitendero chake uye zvinhu zvaanoda.
Matatoo aMariano Diaz- Muvara webhola ane akawanda ma tatoo kuruboshwe rwake. Chikwereti: Instagram
chokwadi #6: Mariano Diaz'Chitendero:
Kutonga kubva kuMariano Diaz maratidziro e tattoo pamusoro ayo ane dhiri reMhandara Maria, iwe unobvumirana neni kuti vabereki vake ndivo vanogona kunge vakamurera achiomerera pakutenda kwechiKristu chechitendero Catholicism.
Chekupedzisira, paMariano Diaz's Biography, tinokupa iwe wikib yekuziva. Tafura iri pazasi ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake nenzira pfupi uye yakapusa.
Mariano Diaz Biography Nhau (Wiki Inquiries)
Zita rizere: Mariano Díaz Mejía.
Zuva uye Nzvimbo yekuzvarwa: 1 Nyamavhuvhu 1993 (makore makumi maviri nemairi emakore), Premierà de Mar, Spain.
Vabereki: Mariano Diaz Snr (Baba) naMariana Mejía (Amai).
Vanun'una Eduard Marcel Núñez (hafu mukoma) uye Sista
Mhuri Kubva: Spain (rutivi rwababa) uye Dominican Republic (divi raamai)
kukwirira: 1.80 m (5 ft 11 in)
Weight: 76 makirogiramu
Basa: Nhabvu (Striker)
Kuremekedzwa (As at March 2020) La Liga: 2016–17,
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Mariano Diaz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts